अशोक दर्जी , एआर , र टन्क बुढाथोकीले , फिदिमको कठ्यांग्रिने जाडोमा दर्सकहरुलाइ यसरी ततायका थिय ! - Nepali News Portal
२२ कार्तिक २०७५, बिहीबार १५:१६
अशोक दर्जी , एआर , र टन्क बुढाथोकीले , फिदिमको कठ्यांग्रिने जाडोमा दर्सकहरुलाइ यसरी ततायका थिय !
२२ कार्तिक २०७५, बिहीबार १५:१६ November 8, 2018 Ajako Samacharचर्चितNo Comment on अशोक दर्जी , एआर , र टन्क बुढाथोकीले , फिदिमको कठ्यांग्रिने जाडोमा दर्सकहरुलाइ यसरी ततायका थिय !
नेपालको पुर्बी भेग पाचथरको फिदिम बजार पर्यटकीय द्रिस्टिकोणले पनि धेरै चर्चित छ । यहि पर्यटकीए नगरीमा आहिलेका चर्चित बाल गायक अशोक चर्चित संगीतकार तथा गायक टंक बुढाथोकी ले फिदिमको जाडो मौसमलाई आफ्नो गरम गरम प्रस्तुति पस्किएर तताएका थिए ।
असोक दर्जी टंक बुढाथोकी र टंक बुढाथोकीका छोरा एआर बुढाथोकी हाल देश तथा विदेशको सांगेतिक भ्रमणमा निस्किएका छन् । देशका विभिन्न सहरहरुला तिहारलाई लक्क्षित गरि आयोजना गरिएको सांगेतिक कार्यक्रममा यो टोलीले बिसेस आमन्त्रण सहित आफ्नो उत्क्रिस्ट प्रस्तुतिहरु दिएर दर्शकहरुको मन जितेका छन् ।
अशोक दर्जी सामाजिक संजालमा भाईरल भए पछि , धेरै दर्शक हरुले अशोक दर्जी लाई देख्ने र भेट्ने रहर गरेका थिए । यस तिहार लक्क्षित सांगेतिक भ्रमणले दर्शक हरुको यो इक्क्षा पनि पुरा भएकोछ । पश्चिम नेपालको दाङ्ग बाट सुरु भएको अशोक दर्जी टंक बुढाथोकीको सांगेतिक यात्रा चितवन , फिदिम , पोखरा हुदै नेपालका लागि समाप्त भएको थिए । नेपालका कार्यक्रम सकाएर टंक बुढाथोकी आजै दुबईका लागि उडेका छन् । जति ठाउमा कार्यक्रम भए अशोक दर्जी टंक बुढाथोकी र एआर बुढाथोकीले आफुहरुले सोचेको भन्दा धेरै माया पाएको जानकारी दिएका थिए ।
दिन भरि मोहत्सव घुमफिर गरि थकान फिदिम बासिहरु अशोक दर्जी टंक बुढाथोकी आउने भन्ने सुनेर उनीहरुको पर्खाईमा बसिरहेका थिए । अशोक दर्जी टंक बुढाथोकीको प्रस्तुति सुरु हुदा साझ परिसकेको थियो । फिदिमको कठ्यांग्रिने जाडो नभने अशोकका सुभचिन्तक हरु उनीहरुको प्रस्तुतिहेर्न कुरिरहेका थिए ।
जब अशोक दर्जीको मंचमा आगमन भयो दर्शकहरु खुसीले निकै हल्ला खल्ला , ताली र सुसेली हाली रहेका थिए । अशोक दर्जी र एआर बुढाथोकीले दिन भर थकान दर्शक हरुलाई केहि रमाइला किस्स्सा सुनाएर उनीहरुको थकान मेटे र टंक बुढाथोकी लाई मंचमा बोलाएर । अशोक दर्जी टंक बुढाथोकी र एआर बुढाथोकीका हित हित गीतहरु सुनाएर फिदिमको जाडो माहोलमा उपस्थित दर्शकहरुलाई तताएका थिए
About Ajako Samachar
View all posts by Ajako Samachar →
हरेक दिन २० हजार स्मार्ट लाइसेन्स छापिदै !तर मालिकाले छाप्न लागेको लाइसेन्सको गुणस्तर यातायात व्यवस्था विभागले यसअघि छापेको जस्तो गुणस्तर भनेहुने छैन !
आज यमपन्चको पाँचौ दिन , अर्थात् अन्तिम दिन , आज टिका लगाउने साइत ,र कुन दिसा फर्केर लगाउने , सम्पुर्ण जानकारीको लागी पुरा पढ्नुहोस!